‘मधुपर्क सम्मान’बाट डा. विमल, सरिता र सुरेश सम्मानित
२०७६ जेठ ३१ शुक्रबार १२:२८:००
काठमाडौं । गोरखापत्र संस्थानको साहित्यिक प्रकाशन मधुपर्क मासिकले वर्षेनी प्रदान गर्दै आएको मधुपर्क सम्मान र पुरस्कार २०७६ बाट तीन साहित्यकर्मीहरूलाई सम्मानित गरेको छ । काठमाडौंमा शुक्रबार बिहान आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कथाकार डा. राजेन्द्र विमललाई ‘मधुपर्क सम्मान– २०७६’ बाट सम्मानित गरियो भने साहित्यकारहरू सरिता तिवारी तथा सुरेश किरणलाई ‘मधुपर्क प्रतिभा– पुरस्कार– २०७६’ बाट पुरस्कृत गरियो ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले तीनै स्रष्टालाई सम्मानित एवम् पुरस्कृत गरे । कार्यक्रममा जोशीले सम्मानित तथा पुरस्कृत साहित्यकारहरूलाई बधाई दिँदै नेपाली साहित्यलाई अब विश्वस्तरमा परिचित गराउन लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा पुरस्कृत स्रष्टाहरू डा. राजेन्द्र विमल, सरिता तिवारी तथा सुरेश किरणले आफ्नो धारणा राखे । मधुपर्क मासिकले कथा सिर्जनामा लामो समयदेखि सक्रिय डा. राजेन्द्र विमललाई मधेश भूमिको सुरुचिपूर्ण कथामार्फत नेपाली आख्यान साहित्यमा महत्वपूर्ण योगदान दिएबापत मधुपर्क सम्मानद्वारा सम्मानित गरेको उल्लेख गरेको छ ।
मधुपर्क सम्मान मधुपर्क मासिकले विगत १८ वर्षदेखि साहित्यमा कलम चलाउने स्रष्टालाई प्रदान गर्दै आएको छ । तीनै पुरस्कारको राशि जनही ३५ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै कविहरू सरिता तिवारीलाई नारी मुक्तिको आवाजलाई साहित्यका माध्यमबाट उजागर गरे बापत तथा सुरेश किरणलाई नेवारी जनजीवनलाई काव्यका माध्यमबाट प्रस्तुत गरे बापत मधुपर्क प्रतिभा पुरस्कार २०७६ प्रदान गरिएको उल्लेख गरेको छ ।
मधुपर्क प्रतिभा पुरस्कार, मधुपर्क मासिकले पहिलो पटक प्रदान गरेको हो । गोरखापत्र संस्थानका कार्यकारी अध्यक्ष कृष्णमुरारी भण्डारीको सभापतित्वमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा जयदेव भट्टराई र अभय श्रेष्ठले बोलेका थिए ।